May trano Madagasikara … : “vahaolana ny 4F nofaritan’ny FFKM”, hoy ny CDE | NewsMada
May trano Madagasikara … : “vahaolana ny 4F nofaritan’ny FFKM”, hoy ny CDE
« Mitoky tena toa antsikely be zarany » ny mpitondra manoloana ireo korontana sosialy maro, tsy fandriampahalemana sy kolikoly manjaka etsy sy eroa. « Sery vitan’anamalaho, tsy amonoana vantotr’akoho ». Raha ny tolokevitra avy amin’ny CDE na ny Club développement et éthique, amin’ny alalan’ny filohany, Rabemananjara Albain, mampahatsiahy ny tenin’ireo raiamandreny FFKM izy, tao amin’ny eglizy Anglikanina Andohalo, ny 22 janoary 2017, nanambara ampahibemaso fa vonona hatrany hitarika sy hanoy ny fampihavanam-pirenena miainga amin’ny 4F (Fiaiken-keloka, fibebahana, fahamarinana, fihavanana) ho fototra iaingana amin’ny fampihavanam-pirenena.
Sao sanatria hiantsoana vahiny
Midika izany fa ny samy Malagasy ihany, afaka mamaha ny olana, manasitrana ny marary azy. Sao sanatria ka tonga eo amin’ny fifandrafesana ka hiantsoana vahiny, toy ny mitranga any amin’ireny firenena misy ady an-trano ireny. Miteny tsy misorona ny CDE raha milaza fa tsy ny fifanorohan’ireo mpitondra nifandimby no katsahina amin’izany fa ampiharo ara-bakiteny ny hoe : « Izay tsy nanota taminareo no aoka hitora-bato mialoha ». Raha mahatsapa tena ny rehetra, miainga avy amin’izay tokoa ny fampihavanana 4F heverin’ny FFKM.
Tsy misy afaka mihambo ho manana ny marina tanteraka eto. Samy nahavita soa eto amin’ny tanindrazana ireo ary samy nanao ny tsy mety ihany koa. “Ny vahoaka hatrany no mibaby mavesatra fa ianareo rehetra, samy mangatsiatsiaka amin’izay misy anareo, tsy sarotra ho an’ny sasany mihitsy aza ny mitsoa-ponenana any ivelany any”, hoy ny CDE.
Hevitry ny Malagasy rehetra mihitsy ny « Fanorenana ifotony » handrindra ny fiainan’ny Malagasy miafara amin’ny fampihavanam-pirenena ankatoavin’ny rehetra. Koa raiso ry filoham-pirenena voafidim-bahoaka ny andraikitrao ka antsoy ireo raiamandreny ara-panahy ireo.